အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ ဒီဇင်ဘာ...
40 Responses to “ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ ဒီဇင်ဘာ...”
နောက်ထပ် ခရီးစဉ်တွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာပုံလေးတွေနဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေစောင့်မျှော်နေမယ်နော်.
ကိုယ်တိုင် ခူးတဲ့ စတော်ဘယ်ရီကို နို့နဲ့ ရောဖျော်၊ တို့ဟူးနွေးလေးရယ်စား။ ပြီးရင် ဆိတ်သားခြောက်နဲ့ ရေနွေးကြမ်းပူပူလေးကို သောက်ပြီး ဒီဇင်ဘာခြံထဲမှာ တစ်နေ့လုံး ထိုင်နေချင်တယ်..... :)
ချင်စိတ်ပေါ်လာပြီ နွားနို့ပူပူလေးသောက်ချင်တယ်း)
(ရှစ်သောင်းဘုရားပေါ်က ပုံတွေ တင်မယ်မဟုတ်လား ဟိ)
မချောကိုလည်း လွမ်းပါတယ် :)
ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ နေရာတော်တော် များများ ကိုရောက် ဖူးပင်မဲ့
အဲ့နေရာလေးတော့ မရောက် ဖူးသေး ဘူးအစ်မရေ ...
မြို့ အထွက် ကန်ကြီးကုန်း မှာ လည်း အဲ့လို ဆိုင် တစ်ခု ရှိတယ် .... အခု ဆိုင်က ပို လှတယ်ရော
ဒီတစ်ခါ ရောက်ဖြစ်ရင်တော့ ရောက်အောင် သွားမယ် ဗျာ .
အချစ်နဲ့ အနီဗာစရီ တခုခုကျမှာ ပျားရည်လထွက်တော့မယ် မေမြို့ကိုပြန်မရောက်တာ ၁၅ နှစ်ပြည့်တော့မယ်း)
အိုကေနေတာဘဲ ဟဟဟဟ အားကျတယ် အားကျတယ်
ဒီဇင်ဘာခြံရဲ့အိုင်ဒီယာလေးက သိပ်ကောင်းတယ်..စတော်ဘယ်ရီသီး ကိုယ်တိုင်ဆွတ်ရတာ ပျော်စရာကြီး..နောင်များကြုံရင် ရောက်အောင် သွားဦးမှ..နောက်ထပ် ခရီးသွားပို့ စ်တွေ စောင့်မျှော်နေတယ်ဗျို့ ..
You have travelalot of places. Keep posing.
သွားချင်လိုက်တာ ဒီဇင်ဘာခြံကြီးကို နောက်တင်မဲ့ပို့စ်တွေကို ခုကတည်းက စိတ်ဝင်စားနေပြီနော်...
မချော ခရီးသွားနေသည် ဆိုသည့်အတိုင်း တော်တော်လေး ခရီးရောက်ခဲ့တာဘဲ... ခြံလေးက သန့် ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး ရှုခင်းတွေက တော်တော်လေးကို လှတယ်... မချောရဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်တွေကလဲ တော်တော်လေးလှလို့ ဓာတ်ပုံတွေကို စိတ်ဝင်တစား ကြည့်လာရင်း စတော်ဘယ်ရီသီးပုံကိုလဲ ဗြုန်းဆို တွေ့ လိုက်ရော သရေယိုကျမတတ် ဖြစ်သွားလို့ မနဲထိန်းထားလိုက်ရတယ်...
ပုံလှလှလေး တွေ ကိုကြည့်ရင်း စထော်ဗယ်ရီ နီနီလေး စားသွားတယ်
ဟိုအပေါ်က ငှက်နှစ်ကောင် လူရှေ့သူရှေ့ .. ရှက်ရှက် :P
ပုံတွေ အားလုံးတက်တာစောင့်နေရင်း ကွန်မန့်အရင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုရင်နှစ်ပါးပု့လေး အတော်သဘောကျမိတယ်။ စတော်ဘယ်ရီစိုက်ခင်းတွေက စိတ်ဝင်စားစရာ ချောရေ..။ ဟိုတုန်းက နာမည်ကြီးစာရေးဆရာတစ်ယောက်က “ ချစ်သူနှစ်ဦး စတော်ဘယ်ရီပင်အောက်မှာ အတူထိုင်ကြတယ် ” လို့ ရေးခဲ့လို့ ဝေဖန်ခံခဲ့ရတာ သတိရလိုက်မိတယ်။ အခုလိုဆိုရင် အပင်အောက် ၀မ်းလျားထိုးထိုင်မှ ရမယ့်ပုံနော်..ဟိ..။ မေမြို့ရောက်ရင် ဒီဇင်ဘာခြံကို သွားလည်ဖို့ တေးထားလိုက်ပြီ..။
ဒီဇင်ဘာစားဥယျာဉ်ဟာ ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါပြီ.. အခုလို အနီးကပ်ဓါတ်ပုံလေးတွေတင်ပေးတဲ့ မချောကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
အိမ်ရှင် မရှိတဲ့ ဟောဒီအိမ်ကို စိတ်ရှိမွှေနှောက်ပစ်လိုက်တာ ဘာ...
တွေ့ ပြီ စိမ်းစားဥချုိုချဉ်ကြော် စိတ်ပြေလက်ပြေစားရင်းနဲ့အစ်မချောရဲ့ အိမ်မှာ
တရေးတမော အိပ်သွားပါတယ်လို့ ...
ရိုက်ချက်လေးတွေကောင်းလိုက်တာ နောက်ပို့စ်နဲ့ ပုံလေးတွေ မျှော်နေမယ် ချောရေ...။
ပုံတိုင်းကိုကြည့်ပြီး လှလိုက်တာ၊လှလိုက်တာ လို့ ပြောနေမိတယ်။ မရောက်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဒီဇင်ဘာခြံကြီးကိုလည်း လွမ်းသွားတယ်။ ပန်းကြိုက်သူမို့ မက်မန်းပွင့် အနီးကပ်ရိုက်ချက်လေးတွေကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပါ...။
I usually go there whenever i visit Pyin Oo Lwin.. Good taste too :) Myat Kyi
(ပုံတွေ ကြည့်ရင်း ပြောသွားသည်...း)))
ပုံတွေကြည့်ပြီး အေးချမ်းသာယာသွားတယ် ချော။
ဒီဇင်ဘာက နွားနို့ပူပူလေးကို လွမ်းမိတယ်... :)
မေမြို့သားဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာခြံတစ်ခါမှ မရောက်ဖူးဘူး . ပြန်မှ သွားဦးမယ် အစ်မ...
ညီမ ပြင်ဦးလွင်ကို ရှားရှားပါးပါး တစ်ခေါက်ေ တာ့ရောက်ဖူးတယ် ဒီဇင်ဘာခြံကို မသိဘူး ..ဒါကြောင့် မရောက်ဖြစ်ဘူး..မချောကတော့ သိတာတွေ အများကြီးပဲ ဒါမျိုးလေး လမ်းညွန်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ မချောရေ.. သွားလည်ချင်တယ် တကယ်..
Welcome back မချော...၊
ပထမဦးဆုံး မြောက်ဦးက ဓါတ်ပုံလေးက လှလိုက်တာ၊ မချောရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ပိုပိုပြီး သေသပ်၊ လှပ လာတယ်၊ မချောက ကြော်ငြာ သဘောလည်း ကောင်းကောင်း နားလည်တာကိုး..၊ ရုပ်ရှင်တွေ trailor ပြသလို ဒီပုံလေး ကြိုပြထားတော့ မြောက်ဦးပို့စ်တွေကို စောင့်ရဦးမှာ ပေါ့လေ..၊း)
ဒီဇင်ဘာ ခြံဆိုတာ အခုမှပဲ မြင်ဖူးတော့တယ်၊ စိတ်ကူး ကောင်းသလို ပီပြင်အောင်လည်း အကောင်အထည် ဖော်ထားလို့ သပ်ရပ်ပြီး နေချင့်စဖွယ်လေး...၊ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ ဝေမျှလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ..။
တော်တော် သာယာတဲ့ နေရာလေး... ဓါတ်ပုံတွေ ကောင်းတယ်...ဌက် လေးနစ်ကောင် ပုံ တော်တော် လှတယ်..
ချောရေ ပို့စ်ကို ဖတ်ရတာနဲ့ အဲဒီခြံထဲကို ကိုယ်တိုင်သွားချင်စိတ် ဖြစ်မိတယ်
ဒီဇင်ဘာခြံတော့ရောက်ခဲ့တယ်.. စတော်ဘယ်ရီသီးတွေ ကိုယ်တိုင်ခူးခဲ့တယ်.. အခုပိုလှလာတယ်.. ကူးရောက်တုန်းက သူတို့ စဖွင့်ခါစဘဲရှိသေးတယ်..
ဌက်ကလေးနှစ်ကောင်လဲသိပ်ကဗျာဆန်တာဘဲ.. ရိုက်တဲ့သူနဲ့တူလို့ဖြစ်မယ်း)
ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ပုံတွေ ကြည့်ပြီး စုံစုံလင်လင် လာဖတ်လိုက်ရတယ်။ အားကျတယ်အစ်မ။ ရိုက်ထားတာတွေ သိပ်သပ်ရပ်တယ်။
အားကျစရာပါလားမမရေ.... ပုံလေးတွေက စိတ်ကို ကြည်နူးချမ်းမြေ့စေလိုက်တာ....
အိမ်ရှင် ပြန်လာခါနီးမှ မရောက်ဖြစ်ဘူး။
ခရီးသည်ကြီး မရွှေချောအတွက် ပို့စ်ပေါင်းများစွာ ပါလာအုံးမှာမို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ချောတယောက်လဲ ခရီးသွားဟန်လွဲနဲ့ ငှက်နှစ်ကောင် အကြင်နာတွေပေးနေတာ ရအောင် ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့သေးတယ် ... ကောင်းလိုက်တဲ့ ရိုက်ချက် တော်လိုက်တာ။ :P
အပေါ်ဆုံးကပုံလေး ဘယ်လိုလှမှန်းမသိဘူး.. အလယ်က ကိုရင်လေးတွေရော.. နောက်ခံရှုခင်းရော.. ကြည့်မဝဘူး.. :)
မြန်မာပြည်မှာ စတော်ဘယ်ရီကို အဲလို စိုက်တုန်းနော်.. စတော်ဘယ်ရီဝယ်စားရင် သန့်အောင် တော်တော် ဆေးယူရတာကို မှတ်မိသေးတယ်။ ဒီဘက်ပိုင်းမှာ စတော်ဘယ်ရီသီးလာရင် မြေကြီးနဲ့မထိအောင် ပလတ်စတစ် တစ်ထပ်ခံစိုက်ကြတယ်။
ဓာတ်ပုံတွေ က အရမ်းလှတာပဲနော် မချော. . .
မရောက်ဖူးသေးတဲ့ ဒီဇင်ဘာခြံထဲကို ကိုယ်တိုင် ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ ဓာတ်ပုံတွေ က ကောင်းလိုက်တာ။ ရောက်ဖူးချင်တဲ့ မြောက်ဦး ခရီးစဉ် ကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်မျှော်နေပါ တယ်။
ဂျူလဲ အလုပ်တွေများနေတာနဲ့ မလာဖြစ်တာ။
မေမြို့ကတော့ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် လှနေတာပဲနော်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခရီးသွားခဲ့တာတွေကို လွမ်းလိုက်တာ။
ဆရာမခင်ဗျား။။။။။။။။။။။ ဓါတ်ပုံလက်စွမ်းပြချက်တွေက လန်ထွက်နေတာပါပဲလား။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း ကြည်နူးလာရတယ်ဗျို့။